Vanhu Vozeya Kuvhota neKunyoresa
Vanhu vasisina vimbo nekuvhota varikuwanda
Pane mifungo miviri yekuti zvinoshanda here kunyoresa kuvhota nekuzonovhota kana kuregera sezvo vanhu vakawanda vakambovhota vari kuti havachisina chivimbo nezvinobuda musarudzo.
Zvichitevera kushomeka kwehuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika, Studio 7 yataura nevagari vemuChinhoyi, Kariba neHurungwe, kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota.
Mumwe mugari wemuChinhoyi, VaNoel Mazani, avo vakanyoresa kuvhota, vanoti kunyoresa kunovhota nekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika.
Muzvari Chipo Nyama vekuHurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo.
VaMazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika.
Vapamidzira vachiti vanhu vasinganovhote vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyorese nekuzonovhota.
Asi mumwe mugari wekuMakonde, VaNomore White, vanoti havana tariro yekunonyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika.
Kune vamwe vedzisvondo vanoti havaende kunonyoresa nekuti havavhote sezvo zvichipesana nemitemo yemakereke avo.
VaAnanias Mushipe, avo vanopinda kereke yeZvapupu zvaJehova, vanoti havanyorese kuvhota sezvo vasingabvumirwe nemitemo yechechi yavo.
Asi VaMushipe vanobvuma kuti pane kutonga kusina kururama nekudaro vanoti vachanamatira vanhu vose pane zvavanenge vachiita.
Mushandi weZimbabwe Electoral Commission, ZEC, VaDavid Mubayira, avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu reKariba neHurungwe, vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo.
Nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika, VaDenford Cherima, vemuChinhoyi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera, anofanirwa kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana.